Website Optimization အတွက် Strategy ကောင်းကောင်းချချင်သူများအတွက် -
လူကြီးမင်းက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက် Website တည်ဆောက်ပြီး အောင်မြင်မှုရှာဖွေနေတဲ့ သူတစ်ယောက်လား? သင့်ရဲ့ Website မှာ Customer အသစ်တွေရရှိလာအောင် Website Optimization Strategy ကောင်းကောင်း ကိုရှာဖွေနေသူလား? ဒီအတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေမယ့် Strategy တွေကို ဖော်ပြပေးသွားပါမယ်…
သင့်ရဲ့ Website ကို Google First Page မှာရောက်ရှိနေစေမယ့် Content နဲ့ SEO လုပ်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီအချက်ကတော့ Business တစ်ခုကြီးမားလာဖို့ အတွက်က Organic Customer ကအရေးကြီးပါတယ်။ 80% သော Website Visitor တွေက Paid Ads တွေကို လျစ်လျှုရှုတတ်ပြီး Organic Search Result တွေကို 20% Focus လုပ်ပြီးရှာတတ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်က 75% သော Website Visitor တွေက First Page မှာရှိတဲ့ Search Result တွေကို Scroll Down လုပ်ခဲတာကို တွေ့ရှိရပါတယ်။ ဒီအချက်တွေကို ကြည့်ခြင်း အားဖြင့် သင့်ရဲ့ Website ဟာ Ranking ထိပ်ဆုံးရောက်နေဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီလို Ranking ထိပ်ဆုံး ရောက်နေဖို့က သင့် Website မှာသုံးထားတဲ့ Keyword တွေက သင့်လုပ်ငန်းနဲ့ သက်ဆိုင်ပြီး Audienceအရှာများနိုင်မယ့် Keyword တွေဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ Content ကောင်းကောင်း Creation လုပ်ခြင်းဖြင့်လည်း သင့်ရဲ့ Website ကို Authority Sites တွေရဲ့ Backlink ပြန်ရခြင်းက သင့် Website အတွက် ကောင်းမွန်ပြီး သင့်ရဲ့ Content နဲ့ Website ကပိုမိုများပြားတဲ့ Search Result တွေနဲ့ အောင်မြင်မှု ရရှိတဲ့ Business Website